kwimfundo Ukraine. Ulwazi luncedo kubafundi angaphandle
inkqubo yemfundo Ukrainian lilawulwa nguMthetho of Ukraine kwaye ibandakanya:
nemfundo yobugcisa kunye nobugcisa;
kuba baseUkraine, ngathi abaninzi baseYurophu, imfundo uqala iziko lemfundo pre-school, ngokuqhelekileyo – ukusuka abancinane. in 2 (ngamanye amaxesha kunye 1.5), itakane ufumana emkhumbini wesitali, kunye 3 – kwiqela omncinane.
Ngamaxesha athile, usapho isigqibo ukufundisa umntwana ekhaya, kodwa ukusukela 2001, yimfundo enyanzelekileyo kokuya kubantwana 5 kweminyaka yobudala. Abazali ungakhetha eziguqulweyo okanye iqela mfutshane lokuhlala, na ngakumbi ngoku 1,000 amaqela asebenza Ukraine. Kwizikolo zesekondari iqela zokusebenza ukulungiselela abantwana besikolo. abafundi elizayo apho kufumana ulwazi olusisiseko, kwakunye baqhelane endleleni yesikolo, ootitshala nabo. kunye 6 eminyaka ubudala umntwana aye esikolweni.
Kunyanzelekile kwaye ifunyenwe kwi iindidi ezahlukeneyo zezikolo, kakhulu – kwizikolo ezizisekondari. Kukho imiphakamo emithathu:
mna – isikolo sezinto (kumabanga 1-4), libonelela ngemfundo esisiseko ngokubanzi,
II – isikolo samabanga aphantsi (kumabanga 5-9), libonelela ngemfundo esisiseko ngokubanzi;
III – isikolo esiphakamileyo (kumabanga 10-11), ibonelela esekondari epheleleyo.
Icwangcisa isikolo – Uphuhliso zonke-ngeenxa womntwana, imnike ukuba ulwazi, elifuna ukuba uluntu. Isikolo kufuneka Ukukhuthaza ukuqeqeshelwa lokuzimela, uphuhliso emzimbeni ukuyilwa imigangatho esisiseko yokuziphatha ngentsulungeko.
kuphuhliso olongeziweyo nobuchule iitalente kwaphunyezwa kwimfundo non-esesikweni. Ezi zikolo ziquka iiklabhu zemidlalo, izikolo zobugcisa, ezahlukeneyo iiklabhu zabafundi kunye nemibutho efana, yoluntu okanye yabucala.
Imfundo ngezobugcisa kunye nobugcisa
Ubujolise ekufumaneni athile. ngoko ke, kuba ukuba zithunyelwe kwezo amaziko emfundo kuloliwe lobungcali ukusebenza. Oku izikolo zokuqeqeshelwa nezikolo eziphakamileyo (ayile, zobugcisa, ephakamileyo), iifemu zesikolo-kwezolimo kunye mveliso, amaziko oqeqesho kunye iindawo ezifanayo. Kwakhona kuquka amaziko oqeqesho yobugcisa, uqeqesho nokuxhotyiswa kwabasebenzi.
izikolo Vocational badla basebenzisane amashishini – uqeqesho kubathengi. Ukuze ufumane basebenza umsebenzi umfundi ngokubanzi akufuneki ukuba baye esikolweni, kuba unako baqeqeshwe ngqo lwemveliso.
kwimfundo ephakamileyo Ukraine yenziwe ngokungqinelana neenkqubo zemfundo kumazwe aphuhlileyo, leyo kweliso UNESCO, Ezimanyeneyo kunye neminye imibutho ngamazwe. Inika yenzululwazi esisiseko, uqeqesho lobungcali kunye nekhoyo, ngokutsha kunye nokulungela abafundi.
Iindlela zokufunda kumaziko emfundo ephakamileyo yahlukile: Ixesha eliphelele, ngamaxesha athile, kude okanye idityaniswe, leyo indibanisa ezininzi zezi fom.
kwiiyunivesithi, kukho amanqanaba amane lokuvunywa:
mna – kwisikolo zobugcisa kunye namaziko emfundo ephakamileyo elingana;
II – College noku- kuye namaziko emfundo ephakamileyo;
III IV (kuxhomekeka kwiziphumo yoqinisekiso) – iziko, Conservatory, elikwisikolo, eyunivesithi.
ukususela 2008, le yeemfuno zokwamkelwa emfundo ephakamileyo kukuhamba vavanyo ozimeleyo lwangaphandle (UPE). in 2016, abafundi baya iimvavanyo kwizifundo ezifana:
ulwimi Ukrainian noncwadi, imbali Ukraine (ukususela kumaxesha amandulo ukuba namhlanje), chemistry, physics, eziphilayo, imathematika, ijografi, njengo – IsiNgesi, Spanish, IsiJamani, Russian nesiFrentshi.
Emva kokuphumelela uyakwazi ukufumana isidanga – kwi post-graduate kunye zobugqirha nezifundo. Oku kubandakanya ukubhala ukuziphendulela ithisisi – PhD okanye ngugqirha ngokulandelelana – kwakunye nokuba kufunyanwe uphando nokufundisa namava.
imfundo izidanga yenza kube lula ukufumana iziqinisekiso ezitsha, umsebenzi okanye umsebenzi. rhoqo, oku kwenzeka ngenxa yemfundo sele abazifumene kwisikolo ebekuso, nangona ungafumana kraca omtsha ezizodwa. Ukuba bapase amaziko emfundo amaziko (amaziko), uqeqesho okanye ngokutsha, iiyunithi ezifanelekileyo amaziko emfundo ephakamileyo, amaziko emfundo yokuxhobisela umsebenzi, iziko lemfundo yokuxhobisela imimandla kwimibutho kunye namashishini yenzululwazi kunye oqingqiweyo.
Ikhefu hlzyo: ukususela 2016 inkqubo yokwamkelwa kwiiyunivesithi Ukrainian kubafundi abavela aviable via Ukrainian Admission Center.
TOP 7 iiyunivesithi zobugcisa Ukraine 2016